China Yakareruka Windsor Mubhedha Solid Wood Wood yekurara Mubhedha Princess Bed # 0114 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Nyore Windsor Mubhedha Solid Wood Mubhedha Wemubhedha Mubhedha Princess Bed # 0114
Muenzaniso nhamba: Amac-0114
Kukura: 1980mm * 2120 * 980mm
Windsor backrest yakasimba huni mubhedha
Kugadzira sei inozorodza uye inofema imba yekurara? Iko shanduko inotanga kubva pakusarudza tambo-yakaita tambo yemusoro. Mubhedha wese wakagadzirwa nematanda ese akasimba. matanda-akavakirwa mapaneru? Veneer? Hapana chimwe chazvo chiripo, zvakatipoteredza zvine hushamwari hwakasimba huni mibhedha, kuti iwe ugone kuishandisa nekuvimba. Iyo huru yezvinhu ndeye muouki, uye iwe unogona kunakirwa neakasikwa uye akatsetseka magadzirirwo kubva kumativi ese. Iko hakuna kunhuwa kunoshamisa, uye huni huni hunopisa hunobuda, zvichikupa pfungwa yekuzorora musango rakasvibira.
Solid huni mubhedha bhodhi rakasimba rinotakura huremu
Iko kuomarara kwemouki kwakanaka kwazvo. Haina kumbopendwa kana kucheneswa usati wabva mufekitori, saka unogona kurara murunyararo. Yese yemubhedha bhodhi yakarongedzwa zvine mutsindo, iine tenon uye tenon maitiro, ayo anowedzera zvakanyanya kutsigira kugona kwemubhedha bhodhi. Muviri wese wakanyatso kupurisirwa kuendesa yakadai uye yakapfava fenicha kwauri. Iko hakuna mabhawa, uye runako rwepakutanga rweiyo huni tsanga inochengetwa kune hukuru hukuru, zvichikubvumidza iwe kuti unzwe iko kunaka kwechisikigo kumba.
Yakakwidziridzwa yekuchengetedza kumagumo kwemubhedha
Pamusoro pemubhedha netsoka dzemubhedha zvakagadziriswa nemhando yepamusoro yezvivakwa kuti ive nechokwadi chekuti mubhedha wehuni wakasimba hausi nyore kuzunza. Yakasanganiswa nemakumbo emubhedha, inobvisa iyo inorema kunzwa uye ine zvese simba uye runako. Isu takapolisha kona yega yega kuve yakatenderera uye yakatsetseka isina mabhureti. Yakakwira-mhando Hardware Hakuzove nematambudziko akadai seengura, ruzha, nezvimwe, kuti ugadzire wakasununguka uye wakanyarara musha wekugara nharaunda iwe.
Chimwe-chidimbu chakakora makumbo
Imwe-chidimbu gobvu yakasimba huni cylindrical makumbo, sainzi yekurerekera kona, yakanyanya kusimba kutakura-kutakura. Iyo yepazasi ine inonzwa pad, iyo iri nyore kufamba, uye haina kuburitsa ruzha, inoderedza kukakavara kurasikirwa kwepasi pako nemubhedha makumbo, uye inowedzera hupenyu hwebasa. Hollowed Iyo Windsor backrest inoita kuti iyo yakazara nzvimbo ive yakajeka uye yakapusa, uye haizovharidzira yako Wallpaper.
Siya yakakwana nzvimbo yekuchengetera pazasi
Mubhedha wepamusoro wakagadzirwa neakakura machena oak, ayo akatsiga uye akasimba, achiita kuti mubhedha wese uve wakasimba. Kureba kwakakwana kubva pasi kunogona kuita kuti nzvimbo yepasi iwanikwe. Isa mamwe mabhokisi ekuchengetera uye shangu mbiri, asi hazvikurudzirwe kuti uizadze. Izvi hazvizove zvinobatsira kufefetera kwematiresi. Wedzera mukobvu wakakora uye wakasununguka kuti ugadzire kureba kwekurara, uye iwe unogona kusvika pazvinhu zviri patafura yemubhedha nekusvika.
Pashure: White Oak Multifunctional Kaviri Mubhedha Solid Wood Yekurara Mubhedha # 0113
Zvadaro: China Fekitori 8M 10M Inotaridzika Gadzirisa Mhepo Inonyengera Pool Kuyangarara Inflatable Yoga Mat 0395
Nordic Mwenje Wepamberi Yemaficha Fenicha Mucheka # ...
Nordic minimalist chena oak yakasimba huni diki ap ...
Wooden Deluxe Yakakwidziridzwa Cat Imba neVharanda uye ...